बाबुरामको नयाँ शक्ती भेलामा को को पुगे ?-NepalKanoon.com
बाबुरामको नयाँ शक्ती भेलामा को को पुगे ?
मंसिर ६ काठमाडौं । नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा जुटेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समर्थक पूर्व माओवादी नेताहरुको भेला अहिले भइरहेको छ ।
चाबहिलको एक पार्टी प्यालेसमा भेला सुरु भएको छ । भेलाको सभापतित्व रामचन्द्र झाले गरेका छन् भने भट्टराईले ताली बजाएर उद्घाटन गरेका छन् ।
नयाँ शक्ति निर्माणमा भट्टराईलाई शुभकामना पनि विभिन्न व्यक्तिहरु पुगेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अतिथिका रुपमा छन् । पद्मरत्न तुलाधर, खगेन्द्र संग्रौला, पूर्व सचिव प्रविण मिश्र, चैतन्य सुब्बा, अशोक शर्मा, रविभक्त श्रेष्ठलगायत पनि भट्टराईलाई नयाँ शक्ति निर्माणका लागि शुभकामना दिन उपस्थित भएका छन् ।
सांसद छाया शर्मा, गोपाल दहित, रामकुमारी राई, डा. राजेन्द्र केसी, केशव दाहाल लगायत पनि कार्यक्रममा छन् । उद्घाटन सत्रपनि बन्द शस्त्र सुरु हुनेछ । भेलामा झण्डै एक हजार नेता कार्यकर्ता उपस्थित छन् ।